Tuesday January 11, 2022 - 16:59:59
John Munyes madaxa waaxda batroolka Kenya
Dowlada Kenya ayaa lagusoo waramayaa in ay dar dar gilisay Howlaha Shidaal Baarista ee ay ka waddo gobolka Laamu ee dhaca xeebta tan iyo wixii ka dambeeyey markii ay iska diiday go'aankii maxkamada ICJ kasoo saartay muranka badda ee ee kala dhexeeyey Soomaaliya.
Gudoomiyaha Batroolka Kenya ninka lagu magacaabo James Ng’ang ayaa sheegay in shirkad ganacsi oo kenya laga leeyahay Magaceedana loo soo gaabiyo (BV) ay bishii Hore Howlaha qodista ka bilowday goobo dhowr ah oo katirsan gobolka Lamu, iyadoo hadda si gaar ah ugu howlan ceelka Mlima1 oo sidoo kale loo yaqaano Block L11B.
Arrintan ayaa daba socota Sahanno dhowr ah oo shaaca ka qaaday in aaggu leeyahay awood shidaal iyo Gaas iyadoo Shirkada (BV) ay ku raja weyntahay in labada bilood ee soo socota ay soo saarto Natiijooyinka heerka uu gaarsiisanyahay Shidaalka dhax ceegaaga goobaha ay shaqadu ka socoto.
" Shaqada ceelka waxaa la bilaabay 28kii bishii Decembar ee sanadkii 2021 waxaana la filayaa in ay socoto Muddo 2 bilood ah" waxa sidaasi Wargeyska lagu magacaabo Business Daily u sheegay guddoomiyaha Batroolka Dowlada Kenya.
Wuxuu intaasi ku daray in haddii mudada 60ka cesha ah ee la filayo in lagusoo afjaro howlaha ceelka ay kasoo bixi weyso Natiijo waxtar leh ay goobo horleh shidalka ka baadi goobi doonaan.
Laga soo bilaabo bishii April ee sannadkii hore, Xukumada Nairobi ayaa xooga saartay sameynta khariidadda keydka saliidda iyo gaaska ee Lamu, waxaa xusid mudan in dowladda Kenya ay horay ugu gacan sayrtay natiijadii kasoo baxday maxkamadda ICJ.